स्थानीय तहका प्रतिनिधि कि अपराधका सारथी? :: PahiloPost
स्थानीय तहका प्रतिनिधि कि अपराधका सारथी?
15th May 2018, 12:41 pm | १ जेठ २०७५
काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। झन्डै दुई दशकदेखि रिक्त रहेको जनप्रतिनिधिले स्थानीयत तह सम्हालेको पनि वर्ष दिन हुन लाग्यो। एक वर्षको अवधिमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले सेवा गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका मुद्दाहरु सुल्ट्याउन सहज पनि भएको छ। विकासका गतिविधि पनि केही हदसम्म बढ्न थालेको छ। तर, कामले नाम कमाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै गलत कामले बदनाम हुनेहरु पनि कम रहेनन्। स्थानीय तहका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म धेरैखाले काण्डमा मुछिए एक वर्षमा। निर्वाचित केही पदाधिकारीको त वर्ष दिन नै प्रहरी हिरासत र अड्डा अदालतमै बित्यो।
गत बिहीवारमात्रै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहालाई समात्यो। हिन्दु युवासंघ वीरगंजका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्या प्रकरणमा मेयर कुशवाहा पक्राउ परेका हुन्। २०६७ असार १२ गते वीरगंज मसानघाट शिव पार्वती मन्दिर नजिकै तिवारीको हत्या भएको थियो। हत्यामा मेयर कुशवाहको संलग्नता नदेखिएको भन्दै गत फागुनमा जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवाहालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो।
कुशवाहा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले स्थानी तह निर्वाचनमा ४ हजार १६३ मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेका थिए। उनी पूर्वमन्त्री प्रभु साहका स्वकीय सचिवसमेत थिए।
मानव बेचविखनमा वडा अध्यक्ष
नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ घ्याङफेदीका वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ अहिले प्रहरी हिरासतमा दिन बिताइरहेका छन्।
वडा अध्यक्ष तामाङविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ। २०६८ अशोजमा सुन्तली तामाङले अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्।
गत पुसमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले वडा अध्यक्ष तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले निलम्वित वडा अध्यक्ष तामाङलाई छोड्न आदेश दिएको थियो। नाम र ठेगाना नमिलेको भन्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले छोड्न आदेश दिएको हो।
तर, सर्वोच्चको आदेशले छुटे लगतै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनी नुवाकोट कारागारमा छन्।
गत वर्षको वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए।
बलात्कार काण्डमा वडा अध्यक्ष
बलात्कार काण्ड जस्तो जघन्य अपराधमा समेत वडा अध्यक्ष मुछिएका छन्। तनहँ घिरिङ गाँउपालिका ४ का वडा अध्यक्षमाथि बलात्कारको आरोप लागेको हो।
वडा अध्यक्ष झकबहादुर कुमालमाथि नवलपरासीकी एक महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन्।
सुन तस्करीमा वडा अध्यक्ष
केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले गत भदौमा बरामद गरेको १६ केजी सुन प्रकरणमा भोटेकोसी गाँउपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल पक्राउ परे। उनी स्थानीय तहमा माओवादीबाट निर्वाचित भएको केही महिनादेखि नै बिदामा बसेका थिए। पौडेलले रसुवाको केरुङ नाकाबाट सुन तस्करी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। व्यूरोले भदौमा सात करोड रुपैयाँ बराबरको सुन सहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
सिन्धुपाल्चोकका २६ वर्षीय पेम्बा दोर्जे शेर्पा, भक्तपुरका ३८ वर्षीय दीपेन्द्र थापा, काठमाडौका ३९ वर्षीय सरोज थापा, काभ्रेका ३८ वर्षीय विष्णु गौतम, भक्तपुर निवासी ३४ वर्षीय राजेन्द्र खत्री, रविन खत्री र धनुषाका ३८ वर्षिय दीपककुमार शाह रहेका छन् त्यस प्रकरणमा समातिएका थिए।
मदिरामा मस्त अध्यक्ष
जनताले चुनेका प्रतिनिधि नै कार्यालयमा मदिराको नशामा लठ्ठ भएर पुगेपछि स्थानीय तहको विकास के होला? एकवर्षको अवधिमा मदिरा पिएर नै कार्यालय पुग्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु पनि भेटिए।
ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्री दिउँसै मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जाने गरेको र होहल्ला गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
झापा मेचीनगर नगरपालिका २ का वडा अध्यक्ष तिलक न्यौपाने पनि यो घटनाबाट अछुतो रहन सकेनन्। उनी मदिरा पिएर कार्यालयमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
न्यौपाने स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट १ हजार १ सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए।
फर्जी विद्यार्थीदेखि वनको मुद्दासम्म
जुम्ला हिमा गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष हिमाली रोकायको नाममा अर्कैले परीक्षा दिँदै गरेको भेटियो। उनको नाममा परीक्षा दिने नक्कली परिक्षार्थी पक्राउ परिन्। राहदेव माध्यमिक विद्यालय मोफ्लामा उपाध्यक्ष रोकायको परीक्षा दिँदै गरेकी विमला रोकायलाई पक्राउ गरिएको थियो।
त्यस्तै बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष सगिर खान पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेनन्। वन सम्बन्धी मुद्दामा खानले २६ दिन कैद भुक्तान गर्ने बाँकी भएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा संङघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट विजयी भएका थिए।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि कि अपराधका सारथी? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।